मानसिक रुपमा कसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ ? - Safal Stories
Home Safal's Columns Safal Tips मानसिक रुपमा कसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ ?
मानसिक रुपमा कसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ ?
हामीले आफ्नो ख्याल राख्ने क्रममा शारीरिक स्वास्थ्यलाई बढी ध्यान दिन्छौं । सुन्दरताको लागि अनुहारलाई सिंगार्छौँ । तर मानसिक स्वास्थ्य राम्रो छैन, हामी भित्रै देखी निराश छौं भने त्यो शारीरिक स्वास्थ्य र सुन्दरता निरर्थक हुन्छ ।
मानसिक रुपमा कसरि स्वस्थ रहन सकिन्छ ?
सबैभन्दा पहिले त धेरै सोच्ने बानी हटाउनुहोस् । अरुले के सोंच्लान् भन्ने डर हटाउनुहोस् । संसारको हरेक व्यक्तिको जीवनमा केही न केही दु:ख छ। त्यसैले आफूलाई ‘दु:खी देख्न छोड्नुहोस् ।
रुनु, रिस उठ्नु, गल्ती हुनु कमजोरी होइन, मानव स्वभाव हुन् भनेर लिनुहोस् । असफल हुनु भनेको अपराध होइन भन्ने बुझ्नुहोस् ।
म खुशी रहन सकें भने मात्र मैले अरुलाई खुशी राख्न सक्छु भन्ने कुरा याद राख्नुहोस् । तपाईंलाई कसैको व्यवहार नराम्रो लागिरहेको छ, तर उसलाई खुशी राख्नको लागि सहिरहनुभएको छ भने त्यो तपाईंको मानसिक स्वास्थ्यको लागि एकदमै खतरापूर्ण हुन्छ ।
हरेक दिन आफूले त्यो दिनमा गरेका राम्रा काम, गरेको उपलब्धि, सिकेको नयाँ कामको बारेमा लेख्नुहोस् । यसले तपाईंमा आत्मविश्वास बढाउँछ, जीवन प्रति आशा जगाईदिन्छ र मानसिक रुपमा बलियो बनाउँछ ।
मुस्कुराउनुहोस्, अरुलाई केही पर्दा सहयोग गर्नुहोस् । धन्यवाद भन्ने र आवश्यक परेको खण्डमा माफी माग्ने बानीको विकास गर्नुहोस् । बालबालिकासंग केही छिन खेल्नुहोस् । आफ्नो परिवारसंग केही छिन समय बिताउनुहोस् । साथीहरुसंग ठट्टा गर्नुहोस् । यी कुरा सुन्दा एकदमै सामान्य लाग्छन्, तर यी बानीहरुले तपाईंमा धेरै ठूलो परिवर्तन आउनेछ ।
बिहान उठेर शारीरिक अभ्यास गर्ने, दौडिने गर्नुहोस् । प्रशस्त पानी पिउनुहोस् । यसले शारीरिक मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि धेरै ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । रिस कम हुँदै जान्छ, तनाव कम हुन्छ, सकारात्मक ऊर्जा बढ्छ, दिमाग ताजा र स्फूर्त रहन्छ ।
घरमा काम गर्दा गाउँदै या नाच्दै काम गर्नुहोस् । यसले गर्दा तपाईंको दिमागमा अनावश्यक सोंच आउंदैनन् , तनाव कम लिनुहुन्छ । गीत गाउँदा र नाच्दा तपाईंले भित्रै देखि खुशी महसुस गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले दिमागमा अनावश्यक दबाब पर्दैन।
काममा एकैपटक माथी पुग्ने प्रयास गर्नुभन्दा विस्तारै सिंढी उक्लिने गरि काम गर्नुहोस् । समय तालिका बनाएर काम गर्नुहोस् र बीचमा आफ्नो लागि पनि समय छुट्टाउनुहोस् । यसले गर्दा कामको अनावश्यक जोखिम र भार कम हुन्छ । प्रशस्त निन्द्रा पुग्ने गरि सुत्नुहोस् ।
तपाईं रित्तो महसुस गर्नुभयो, मान्छेहरुको भींडमा रहंदा पनि एक्लो महसुस गर्नुभयो भने, तपाईंलाई सहयोगको खाँचो हुनसक्छ । नहिच्किचाई आफ्नो साथी या कोही नजिकको मान्छेलाई आफूले महसुस गरिरहेको कुरा राख्नुहोस् । एक दिन मात्र नभएर अर्को दिन पनि तपाईंलाई त्यस्तो महसुस भयो भने मनोवैज्ञानिक कहाँ गएर आफ्नो समस्या राख्नुहोस् ।
सकारात्मक सोंच भएका व्यक्तिहरुको संगत गर्नुहोस् । आफ्नो रुचीका कामहरु गर्नुहोस् । बिदाको समयमा कतै घुम्न जानुहोस् । पुस्तक पढ्नुहोस् । चलचित्र हेर्नुहोस् । गीतसंगीत सुन्नुहोस् ।
Previousकथा : कप राम्रो कि कफी मीठो ?
Nextव्यवसायी एलन मस्कले स्कुलका विद्यार्थीलाई खानेपानी सुविधाको लागि प्रदान गरे करिब ५ लाख डलर